२ः१ अनुपातमा फागुन १३ गतेदेखि हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर २ः१ अनुपातमा फागुन १३ गतेदेखि हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 192 views
बीमा ऐन २०४९ अन्तर्गत बीमा समितिबाट पहिलो जीवन बीमा कम्पनीको रूपमा २०६४ फागुन १५ गते लाइसेन्स प्राप्त गरी २०६४ चैत २१ गतेदेखि व्यवसाय शुरू गरेको यस एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालू आव २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासमा रू. २ करोड ५८ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको आम्दानी २१ प्रतिशतले बढेकाले नाफा बढेको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी २० प्रतिशतले बढेर रू. ८० करोड ५५ लाख पुगेको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. २५ करोड ४३ लाख छुट्याएको छ । साथै बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार यस कम्पनीले फागुन १३ गते देखि २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारीमा गरेको हो । विक्री प्रबन्धक एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ । माघ ७ गतेसम्म शेयर किन्ने शेयरधनीले यो हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् । हकप्रद शेयर बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २० करोड ८३ लाख पुग्नेछ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. ८७२
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. १९८९
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. ७७५
१८० दिनको भारित औसत मूल्यः रू. १३८३
अध्यक्षः विजय कुमार सरवागी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः राजेश कुमार श्रेष्ठ
प्रधान कार्यलयः मैतिदेवी, काठमाडौं
उप शाखाः ७०
स्टक टिकरः एएलआइसिएल
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ३ दशमलव १० प्रतिशतबाट बढेर ३ दशमलव २१ प्रतिशत पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा बीमा कोषमा रू. ११ अर्ब ३२ करोड जम्मा भएको छ ।
दीर्घकालिन लगानी तथा कर्जा २८ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेर रू. १० अर्ब ८४ करोड ५३ लाख रहेको कम्पनीले बीमालेखको धितोमा रू. ५८ करोड ७८ लाख कर्जा उपलब्ध गराएको छ ।
चालू सम्पत्ति रू. १ अर्ब १३ करोड २२ लाख र चालू दायित्व रू. ३६ करोड ३१ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले रू. ४ करोड ७ लाख ९६ हजार आम्दानी गर्दा रू. १ करोड ४९ लाख ३३ हजार खर्च गरेको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा रू. १ अर्ब २२ करोड ४४ लाख बीमाशूल्क आर्जन गरेको कम्पनीले रू. ५५ करोड ८४ लाख ५ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
२ हजार ९ सय ५७ जनालाई दाबी भुक्तानी गरेको कम्पनीले ९४ जनालाई रू. १ करोड ६९ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
कम्पनीको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. ६ दशमलव ४२, मूल्य आम्दानी अनुपात २ सय १४ दशमलव १५, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. १ हजार ५ सय ८७ दशमलव ४८ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ३१ दशमलव ५७ रहेको छ । मङ्गलवार शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे ६ गुणा छ ।
विक्री चापः कम्पनीको मङ्गलवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप १ गुणा बढी भएको छ । सो अवधिसम्म २ हजार ३ सय ३५ कित्ता शेयर विक्री र २ हजार १ सय २० कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग रहेको थियो ।
२० नोभेम्बर २०१७ २० फेब्रुअरी २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः कम्पनीकोे ५८ दिनको कारोबारमा अन्तिम दिन कालो ओपनिङ मारोबोजु आकृति बनेको छ । यसले आगामी दिनमा शेयर मूल्य घट्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआईः कम्पनीकोे ५८ दिनको कारोबारमा आरएसआई ओभरसोल्ड जोन (२८ दशमलव ६३ स्केल) मा छ । यसले शेयर विक्री चाप रहेको देखाँउछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीकोे ५८ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १७ दशमलव ८० विन्दुमा छ । उतारचढाव मध्यम रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीकोे ५८ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने र २६ दिने औसत मूल्यरेखाभन्दा तल छ । हालको मूल्य रू. ८ सय ७० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. ९ सय २ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने मूल्य सस्तिएमा रू. ८ सय ६० मा टेवा पाउन सक्छ ।